7 Qaab Oo Cagaha Loo Qurxiyo - Daryeel Magazine
1. Lugaha ugu qabee baaf
Waa in aad si joogta ah u dhaqdaa cagagahaaga todobaadkiiba mar. Ku shubo biyo diiran oo cusbo ama shaambo leh baaf oo dhex gali cagaha, kuna dhaaf ilaa 10 daqiiqo.
2. Qalaji cagaha
waxa muhiiim ah in aad cagaha qalajiso marka aad dhaqdo, waliba ha ilaabin in aad faraha dhexdooda qalajiso mar walibana ku dadaal inaad marsato kareemada duxda iyo qoyanka ay ka heli karaan cagahaaga si ay u noqdaan kuwa jilicsan oo dhalaal badan.
3 – Cidiyaha:
Cidiyahaaga ku dadaal in aad u jarto si qurux badan oo toos ah adigoo istimalaya maqaska cidiyaha kadibna soofee,waxaadna marisaa hadii aad jeceshahay xino si ay u qurux badnaadan.
Akhriso: qurxinta iyo xanaanaynta gacmaha
4 – Xoq cagaha:
5 – Kareem mari cagaha:
Cagaha mari kareemka cagaha ee jilcinaya. Hadii ay caguhu ku dildilaacaan ama safan kaa gasho ayaa waxa aad soo iibsan kartaa kareem hoos u dhigaya dildilaaca. Waxa kale oo muhiim ah in aad ogaato in ayna fiicnayn in aad faraha dhexdooda mariso kareem. Hadii faraha dhexdooda aad kareem marinayso ha ahaado ka loogu tala galay ee ka ilaalinaya fangaska (qawadka).
6. U duug cagahaaga:
U duug cagahaaga ama u daliig adigoo isticmalaya saliida cagaha, si tartiib ah u riix riix farahaaga adigoo la raacaya ilaa cagta hoose waxaadna marisaa cidiyahaaga si gaar ah kareemka ama saliida aad isticmaaleyso si ay u noqdaan kuwo nadiif ah.
7. Rinjiga cidiyaha ama cilaan:
3 Qaab Oo Loo Xaliyo Xamaasada Macaamiisha Xanaaqsan Hababka Jidhka Iyo Timaha Loogu Qurxiyo Timirta Faa’iidooyinka Saliida Saytuunka Iyo Sida Loogu Qurxiyo Jidhka & Timaha